Vaovao - Arenti manendry ny fitantanana ITM ho mpizara ao an-toerana any Vietnam
Hangzhou - 1 Janoary 2021 - Arenti, mpamatsy fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano IoT malaza, dia nanambara androany fa manamafy ny fisiany any Vietnam miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka ITM Management vaovao ho mpizara ho an'ny seha-pamokarana andiany iray manontolo.
Ny fiaraha-miasa vaovao dia manamafy ny fanoloran-tenan'i Arenti amin'ny fantsom-pivarotana mpanjifany any Vietnam ary miorina amin'ny fisian'io tsena voalohany io. Ny fizarana amin'ny alàlan'ny fitantanana ITM dia ahafahan'ny Arenti mandinika tsara kokoa ny tsena any Azia atsimo atsinanana.
ITM Management no mpizara voalohany ny vahaolana amin'ny telecom sy TIC any Vietnam. Thu, mpitantana ny fampandrosoana ny orinasa ITM, dia nilaza fa, “Ny fakantsary fakan-tsarimihetsika an-trano an-trano dia nanjary zava-dehibe tato ho ato. Tamin'ny taona 2020, indrindra, ity orinasa ity dia nitatra be tokoa noho ny COVID-19 sy ny fangatahana goavambe avy amin'ny tokantrano sy orinasa madinidinika momba ny vahaolana fiarovana an-trano mora vidy kokoa hifandraisany sy hiarovana ireo malalany amin'ny teti-bola voafetra. Mba hihaonana amin'ny fitomboan'ny fangatahana ary hanohizanay hanomezana traikefa tokana an-tsokosoko an'ireo mpivarotra, dia nampianay ny vokatra Arenti andian-tsarimihetsika manontolo ho an'ny portfolio-nay tamin'ny faran'ny taona lasa. Notendrena ho mpizara mivantana sy mpanafatra fakantsary fakantsary manontolo an'i Arenti izahay nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2021. Tena reharehanay ny fiaraha-miasa amin'ity mpilalao manerantany ity ary matoky tanteraka ny vahaolana azonay omena miaraka amin'i Arenti. ”
Siro Huang, Talen'ny BD any ivelany any Arenti, dia nilaza hoe: "Faly be izahay manambara fa ny ITM Management dia ho lasa Distributor Arenti ho an'ny vahaolana fakantsary fakan-tsarimihetsika fiarovana an-trano rehetra. Eo ambanin'ny ara-dalàna vaovao eo amin'ny toekarena manerantany, ITM Management sy Arenti dia mino fa ny fakantsary fiarovana an-trano Iot marani-tsaina dia ho lasa tsena mitombo haingana. Mino izahay fa ity fiaraha-miasa ity dia hitondra ny sanda ambony indrindra ho an'ny ITM sy i Arenti ary ho an'ny mpanjifanay rehetra. "
Ny fiaraha-miasa mivantana amin'ny ITM Management dia hapetraka manomboka amin'ny 1 Janoary 2021.
Momba ny fitantanana ITM
Niorina tany HCMC, Vietnam, tamin'ny 2009, IT Management dia manome ho an'ny matihanina:
Serivisy IT amin'ny fikojakojana, fametrahana ary fividianana
Solosaina PC & Laptop
Miaraka amin'ny rafitra lozisialy anatiny mahery sy fanavaozana tsy tapaka an'ireo haitao farany, manome antoka izahay fa misy fanoloran-tena avo lenta amin'ny asanay mandritra ny 10 taona mahery.
Ny mpiasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia manome lanja ny fahatakarana lalina ny fanambinao mba hampifanaraka ny fahaizantsika sy ny toe-javatra iainanao ary hanome vahaolana namboarina izay tena mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
Ny fahombiazana, ny fahombiazana ary ny reactivity dia soatoavina nanangana ny fahombiazantsika ary ankehitriny mamela antsika hitombo hatrany any Vietnam sy any ivelany. Avy amin'ny birao roa, ao amin'ny ITM HCMC sy ITM HANOI, ITM Management dia manompo amidy an-jatony ny mpivarotra ao amin'ny fizarana TIK.
Fotoana fandefasana: 20/03/21